सानिमा बैंकमा सीइओ दाहालको दादागिरी ! - Aathikbazarnews.com सानिमा बैंकमा सीइओ दाहालको दादागिरी ! -
सानिमा बैंकका सीइओ भूवन कुमार दाहालले आफूले छोडेपनि आफूसंगै नविल बैंकबाट लगेका तेस्रो पदमा कार्यरत निश्चल राज पाण्डेलाई सीइओ बनाउन लागि परेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । दोस्रो स्थानमा रहेका तेज बहादुर चन्दलाई लत्याउदै पाण्डेलाई सीइओ बनाउन वर्तमान सीइओ भुवन कुमार दाहाल लागि परेपछि सानिमा बैंकका सयौं कर्मचारीहरु संशकित भएको देखिन्छ ।
सानिमा बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निश्चलराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने पक्का भएको छ । उनको नियुक्ति सन्दर्भमा बैंकले कर्मचारीलाई जानकारी गराइसकेको छप्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दहाल दुई कार्यकाल पुरा गरेर माघ ११ गतेबाट अवकाश हुँदैछन् । त्यसपछि १२ गतेदेखि पाण्डेले बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्ने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
पाण्डे यसअघि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भएपछि बैंक सञ्चालक समितिले डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा गरिसकेको भेटिएको छ । दहालभन्दा एक तह तल अर्थात नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा तेजबहादुर चन्द छन् । उनी लामो समयदेखि सानिमा बैंकमा छन् । चन्दलाई छाडेर बैंक सञ्चालक समितिले पाण्डेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएकाले दाहालको दादागिरीले हद नागेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
पाण्डे जोखिम र ऋण प्रवाहमा अब्बल मानिन्छन् । नबिल बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनी ८ वर्षअघि सानिमा बैंक गएका हुन् । नबिल बैंक छाडेर डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमारूपमा भुवन कुमार दाहाल सानिमा गएका थिए । त्यसबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने प्रतिबद्धताका आधारमा दहाल सानिमा गएका थिए । उनले नबिलबाट पाण्डेसहित अन्य केहीलाई पनि लगेका थिए । त्यही गुन तिर्न उनीले दोस्रो व्यक्ति छाडेर आफ्ना आसेवासेलाई सीइओ बनाएर सानिमा बैंकका आम कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने काम जाँदा जाँदै गरेको भेटिएको छ । कहाँ छ राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन । यसबारे हामीले खोजी शुरु गरेको छौं । सचेत भया ।
उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकमा न्यौपाने नियुक्त
जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण सभा असार २१
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको साधारणसभा जेठ २८ गते हुने
कोरोना भाईरसका बीच दुई दर्जन कर्मचारी निस्काशन गर्ने यी महारथीहरुलाई चिनौः सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको दादागिरीले हद नाग्यो, बीमा समितिका अध्यक्षज्यू ?
दशैँमा हवाई यात्रुलाई टिकट पाउनै सास्ती
एशियन लाइफले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लाभांश नदिने
दैलेखमा कोरोना संक्रमित र प्रहरीबीच झडप